I-Honor - Shineon Technology Co., Ltd.
I-Shineon ikhethwe njenge-herring ebomvu engu-top100 ka-2013 emhlabeni jikelele
ISANTA MONICA, eCalif. — UMHLA-I-Red Hering imemezele i-Top 100 Global yayo ukwazisa izinkampani ezizimele ezihamba phambili ezivela eNyakatho Melika, eYurophu nase-Asia namuhla, begubha ubuqambi nobuchwepheshe balezi ziqalisi ezimbonini zabo.
UShineon uklonyeliswe ngomklomelo webhizinisi likazwelonke lobuchwepheshe obuphezulu.
Ekuseni ngoMashi 16, Ingqungquthela Yomsebenzi Wezobuchwepheshe Nezobuchwepheshe ka-2019 ibibanjelwe iNanchang High-tech Zone Administration ehholo leNanchang 28th esikoleni esiphakeme segatsha lobuchwepheshe. Ingqungquthela bekuhloswe ngayo ukubuyekeza ngokuphelele futhi kuphothulwe ...
Umklomelo ka-2011 womhlaba wonke we-cleantech 100
Ukuze ufaneleke ukuthola i-Global Cleantech 100, izinkampani kumele zizimele, zenze inzuzo futhi zingabhaliswa kunoma yikuphi ukushintshana kwamasheya. Kulo nyaka, izinkampani eziyi-8 312 eziqhamuka emazweni angama-80 zaphakanyiswa, iShineon ingenye yazo. Inqubo yokukhetha ihlanganisa idatha yocwaningo lweCleantech Group nezahlulelo zekhwalithi ezivela kwabaphakanyisiwe ...